မကြာခင်က မွေးဖွားလာတဲ့ ချစ်စရာသမီးလေးကို ထပ်မံမွေးစားလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မေမေ ခိုင်နှင်းဝေ
HomeEntertainmentမကြာခင်က မွေးဖွားလာတဲ့ ချစ်စရာသမီးလေးကို ထပ်မံမွေးစားလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မေမေ ခိုင်နှင်းဝေ
Uncle Jam April 07, 2019
ခိုင်နှင်းဝေ ကတော့ အနပညာလောကရဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ ကြယ်ပွင့်တစ်ပွင့်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ထင်အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ အနပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေ ကတော့ ပရဟိတ အလုပ်တွေကို အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်ကိုင်နေသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့တိုင်အောင်မြင်နေဆဲဝါရင့် သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချော ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ လူထုအတွက် အကောင်းဆုံး တတ်နိင်တဲ့ဘက်ကနေ ထောက်ပံ့မှုတွေပေးနေသူလဲဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားသမီးလေးတွေကို မွေးစားထားပါတယ်။
ယနေ့မှာတော့ ခိုင်နှင်းဝေတစ်ယောက် မကြာခင်က မွေးဖွားလာတဲ့ ချစ်စရာသမီးလေးကို ထပ်မံမွေးစားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ” မွေးပါပြီရှင်…၇ပေါင် ၁၁ အောင်စ အင်္ဂါသမီးလေးမနေ့ကမတင်အားလို့ အခုမှတင်လိုက်ရတာပါ…ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမဲ့ ခွန်အားလေးပေးမဲ့ တယောက်ထပ်တိုးလာပါပြီ. ” ဆိုပြီး သမီးလေးရဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ ရေးသားထားပါတယ်။
မကွာခငျက မှေးဖှားလာတဲ့ ခဈြစရာသမီးလေးကို ထပျမံမှေးစားလိုကျပွီဖွဈတဲ့ မမေေ ခိုငျနှငျးဝေ
ခိုငျနှငျးဝေ ကတော့ အနပညာလောကရဲ့ အောငျမွငျနတေဲ့ ကွယျပှငျ့တဈပှငျ့ဖွဈပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ခဈြထငျအားပေးမှုကိုအပွညျ့အဝရရှိထားတဲ့ အနပညာရှငျတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ ခိုငျနှငျးဝေ ကတော့ ပရဟိတ အလုပျတှကေို အားသှနျခှနျစိုကျလုပျကိုငျနသေူလေးပဲဖွဈပါတယျ။
ယနတေို့ငျအောငျမွငျနဆေဲဝါရငျ့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးတဈလကျဖွဈတဲ့ မငျးသမီးခြော ခိုငျနှငျးဝကေတော့ ဆငျးရဲနှမျးပါးတဲ့ လူထုအတှကျ အကောငျးဆုံး တတျနိငျတဲ့ဘကျကနေ ထောကျပံ့မှုတှပေေးနသေူလဲဖွဈပါတယျ။ခိုငျနှငျးဝကေတော့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သားသမီးလေးတှကေို မှေးစားထားပါတယျ။
ယနမှေ့ာတော့ ခိုငျနှငျးဝတေဈယောကျ မကွာခငျက မှေးဖှားလာတဲ့ ခဈြစရာသမီးလေးကို ထပျမံမှေးစားလိုကျပွီဖွဈပါတယျ။ ခိုငျနှငျးဝကေတော့ ” မှေးပါပွီရှငျ…၇ပေါငျ ၁၁ အောငျစ အင်ျဂါသမီးလေးမနကေ့မတငျအားလို့ အခုမှတငျလိုကျရတာပါ…ရှဆေ့ကျလြှောကျရမဲ့ ခှနျအားလေးပေးမဲ့ တယောကျထပျတိုးလာပါပွီ. ” ဆိုပွီး သမီးလေးရဲ့ ခဈြစရာပုံရိပျလေးတှနေဲ့အတူ ရေးသားထားပါတယျ။